Dubartootaafi Sirna Gadaa – siifsiin
Dubartootaafi Sirna Gadaa
“Dubartoota malee Gadaan Guutuu hin ta’u!”kana jechuu waanti nama dandeessisu; jalqabarratti dubartoonni caasaa sadarkaalee gadaa keessa hin darbiin malee ilma deessee guddisuufi sirna gadaaf qofa osoo hin ta’iin kan biyya bulchuufi duulee biyya eeguuf geessisuun kan bakka gudda qabdudha.
Kanamalees, raawwii sirna gadaatiif dhangaafi meeshaalee adda adda kan qopheessuu dubartoota. Dhangaan qophaawwus qodaa shan jedhama, qodaan shan kunis; qorii, caccabsaa, cuukkoo kan qabatu yoo ta’uu, yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu foolleen akka hin abarreefi akka gadaan abbaa manaa ishee hanquu hin taaneef kan qophaawuudha.
Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammoo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okoleefi gadii qabattee cina deemti. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul’isudha.
Yoo kan fuudhee hiike ta’e ammoo bakka isheen jirtu barbaadee akka isheen seera guuttuufiif nigaafata. Isheenis, seera kana guutuufiif dirqama qabdi. Seera Gadaatiin kennameef waan ta’eef. Namichi sun erga hiikeellee haadha manaa biraa kan fuudhe yoo ta’e, seera kana guutuufi kan danda’u haadha manaa ishee duraati. Sababiin isaas, haadha mana qarree, kan Rakoo itti qalan waan taateef. Angafummaafi safuun kan ishee duraati. Kanamalees, yoo kan jalaa duutee taatellee, jalqaba bakka awwaala ishee irra dhaabbachuun “Koottu seeraa naa guutii” jechuun yeroo sadii gaaffiin sagalee dhageessisa. Sana booda, haadha manaa boodarra fuudhee yoo qabaate yookaan obboleetti isaatti tumaa seeraa tumuun, seera kana akka guuttuufiif qopheeffata jechuudha. Kunis seera qabeessummaa ykn seera, sana guutuuf dubartoonni hammam barbaachisoo akka ta’an hubachuun nama hinrakkisu.
Sagantaan eebbaa raawwii sirna gadaa keessatti isa ol’aanaadha. Yaad-rimeen eebbaa waa lama ofkeessaa qaba. Inni jalqabaa Eebbaa jechuun, waan uummataaf barbaachisu waan akka tolu barbaadaniifi eebbisuun qaqqabsiisuu ykn badhaasuu ykn, waan uummataaf gaarii hin ta’iin ammoo, abaaranii balleessuuf yoo ta’u, Inni lammaaffa eebbiisuun, seera tumame mirkaneessuu jechuudha. Fakkeenyaaf, seera fooyya’ee bara waliin deemuu uummata akka tajaajiluuf baasaanii erga irratti walii galanii booda, tumaa seeraan mirkaneessu. Seera tumame kanas. “Haa eebbisnu, haa eebbisnu” jechuun mirkaneessu jechuudha. Kanaaf eebbisuun gama tokkoon, waan gaarii akka toluuf kan eebbisani qaqqabsiisan yoo ta’u, karaa gama biraatiin ammoo, seera tumame mirkaneessuu waliin wal qabata.
Dubartoonnis, sagantaa eebbaa kana irratti argamuun Aadaa ykn Seeradha. Dubartoonni argamanis, qixa abbootii gadaa dhabbaachuun eebba sana mirkaneessu. Dubartoota keessa kan argamanis tokko dubra qarree yoo taatuu; kan saalqunnamti hin eegaliintu filatama. kan biraa ammoo, jaartii cifiree kan jedhamtu kan saalqunnamtii dhaabdeefi laguu ji’aa hin argine ykn kan irraa dhaabbateetu filatama. kunis mallattoo qulqullummaa (sacred)ti.
Kana egaa dubartoonni sirna gadaatiif hundeedha ykn lafee dugdaati kan akka jennu nu taasise.
Dubartoonni seerri Waaqaafi safuun hawaasaa akka hin cabneefi sababa kanaanis, ijaaramni hawaasaa akka hindiigamne, Hawaasa seera hinqabne akka hin taane to’achuu keessatti hirmaannaa daran ol’aanaa qabu. Fakkeenyaaf dhimmoota tokkummaa hawaasaa diiguu danda’uu jedhaman kanneen akka waldhabdeefi waraana gosaafi gosa gidduutti gaggeeffamu. Wantoota seera Waaqaafi safuu uummataa balleessu jedhaman kanneen akka Gaa’ila firaafi fira gidduutti ta’uufi kanneen kana fakkatan ni to’atu. To’annaan isaanis, yoo firriifi firri walfuudhee wal irraa hore, hawaasa haraamome kan jamaan, duudaaniifi namni qaama hir’uu keessatti dhalatu, kan abaarsiifi badisi Waaqaa nutti dhufa jedhanii amanan to’achuudha. Kana malees, yoo waraanni gosa gidduutti uumame, Siiqqee qabachuun, wal waamanii waraana sana gidduu yoo seenan battalatti lolli qabbana’a.
Maatii, qe’eefi hawaasa keessa jiraatan keessatti wanti haaraa yoo uumamu, safuun yoo cabu, dubartoonni wal waamanii Siiqqee qabatanii “maaloo kuni Safuudha. Takkaa wanti akkasi aayyoofi Aabboo keenya keessattuu mul’atee hinbeekuu.” Jechuun akka furmaanni hatattamaa itti kennamu Sirna Gadaa waliin wal cina ta’uun hojjatu.
Dimshaashumatti, dubartiin jireenya guyyuu ilmi nama gaggeessu keessatti, hariiroo hawaasa gidduu jiru tumsuu keessatti, nageenya biyyaa eegsisuu keessatti, safuufi seera Waaqaa kabachiisuufi to’achuu keessatti gahee tilmaama hinqabne qabu yoo jedhame kan nama hin saalfachiifne.
Boonii Tasfaayee Guutaa
Previous Previous post: YAA’II GUMII ARDAA JILAA ME’EE BOOKKOO FI TUMAATA SEERAA KAN BARA 2008
Next Next post: IRREECHA TULLUU!